Faahfaahin Laga Helayo Howlgalkii Xarunta Maamulka Gobalka Banaadir. – Calamada.com
Faahfaahin Laga Helayo Howlgalkii Xarunta Maamulka Gobalka Banaadir.
calamada July 25, 2019 1 min read
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa Khasaaraha Dowladda Federaalka kasoo gaartay Weerar qorsheysan oo Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ka fulisay Xarunta Maamulka Gobalka Banaadir ugu magacaaban Dowladda Ridada.
Howgalkan waxaa lagu dilay Ugu Yaraan Sagaal Sarkaa oo ka tirsan Maamulka Gobalka Banaadir kuwaasi oo ay ku jiraan Gudoomiyayaashii Degmooyinka Waabari, Shibis Iyo Cabdi Casiis.
Sidoo kale Howlgalkan waxaa ku dhaawacmay Mas’uuliyiin sar sare oo ka tirsan Dowladda Federaalka kuwaasi uu ka mid yahay Murtad Cabdi Raxman Yariisow oo ah gudoomiyaha Ridada ee Gobalka Banaadir kaasi oo Xaaladdiisa ay adagtahay.
Afhayeenka ciidanka, Sheekh Cabdi Casiis Abuu Muscab ayaa Idaacada Andalus u sheegay in Mujaahidiintu ay howlgal si heersare loo abaabulay ka fuliyeen gudaha xarunta maamulka gobolka Banaadir, halkaas oo ay ku dileen cadow fara badan.
Sheekh Abuu Muscab ayaa sheegay in bartilmaameedku ahaa madaxa UN u jooga Soomaaliya, ninka lagu magacaabo James Swan, kaasoo halkaas uga qeyb galayey kulan uu la lahaa mas’uuliyiin ka tirsan cadowga.
Eygeyga QM ayaa si dirqi ah kaga bad-baaday weerarka, waxaana la sheegay inuu goobta ka tagay daqiiqado un ka hor inta uusan howlgalku dhicin.
Halkan Ka Dhageyso Xogtii U Dambeysay Ee Howlgalka.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 22-11-1440 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Habeenimo Ee Andalus.